Shiineyska Shidaalka Difaaca ee Wershada Dheereeya (Sterile) iyo Warshadaha | Pantex
Dharka ilaalinta caafimaadka, oo sidoo kale loo yaqaanno dharka badbaadada caafimaadka, kahortagga gebi ahaanba, ama kiimikada fayriska. Dharka badbaadada caafimaadku waxaa loola jeedaa dharka badbaadada ee ay adeegsadaan shaqaalaha caafimaadka (dhakhaatiirta, kalkaaliyeyaasha iwm) iyo dadka galaya goobo caafimaad oo gaar ah (sida adeegsiga jawiga aadka u daran sida ICU iyo Xaaladda Sterile, dadka gala goobta cudurka, iwm).
Dharka ilaalada caafimaadku wuxuu leeyahay uumis wanaagsan iyo carqalad, wuxuu shaqeysanayaa iska caabinta galitaanka aalkolada, dhiigga, dheecaanka jirka, walxaha hawada kujira, iyo viruska bakteeriyada, si wax ku ool ah u ilaaliya badbaadada shaqaalaha isla markaana deegaanka ka dhig nadaafad.
Dharka guud ee difaaca jirka badanaa wuxuu ka kooban yahay koofiyad, dusha sare iyo surwaalka. Iyada oo la adeegsanayo jarista, is-dhejinta, adkaynta, sharooto isku dhejinta iyo tikniyoolajiyada kale ee wax soo saarka, waxaan soo saari karnaa dhar ilaalin caafimaad oo aqoon leh. Nidaamka oo dhan, mashiinka ku lugta leh badanaa waa mashiinka tolo iyo mashiinka wax riixa.
Dharka ilaalinta ayaa ka sameysan walxaha go'doominta ah, sidaa darteed kuleylka ma fududa in la soo bandhigo, haddii kuleylka uu aad u badan yahay, dadku waxay dareemi doonaan raaxo la'aan, saameyn ku yeelanaysa hufnaanta iyo tayada shaqada. Raaxo waxaa ka mid ah biyo haynta, iska caabbinta uumiga biyaha, gogosha, culeyska, dhumucda dusha sare, guryaha dabiiciga ah, milicsiga, ur, iyo dareemida maqaarka, kuwaas oo kuwa ugu muhiimsan ay yihiin isbadalka hawada iyo uumiga uumiga biyuhu.
Qalabka iyo Muuqaalka:
100% non-tostaraammo PP + PE, Dharka biyaha aan la daboolikarin, guryaha ka hortagga. Hood dabacsan, anqawyada iyo curcurka oo kor u qaada raaxada iyo ilaalinta.
Isticmaalka caadiga ah:
Xaraashyada loo yaqaan 'Pantex coverage' waxaa loogu talagalay in lagu ka ilaaliyo shaqaalaha waxyaabaha khatarta leh. Waxaa loo istcimaalaa kahortaga xaalada qallalan ama dareeraha fudud ee buufiska oo kuxiran sunta iyo xaaladaha soo-gaadhista. Waxay ka hortegi kartaa bakteeriyada, fayraska, dareeraha sunta ah iyo dareeraha waxyeelada leh sida dhiigga bukaanka dareeraha, xabadka, kaadida iyo dareeraha kale, qalabkan ayaa ah mid u adkaysata daawada.
Isticmaal keli ah, Habkani waxaa loo isticmaali karaa deegaanno aad u xun sida ICU iyo xaalad nadiif ah
Waxyaabaha 100% non-to PP + Laan cadayn, Sterile
Moodel Maya. PT-001
Qaabka Jeexa gacmo furan iyo canqowga, oo guntin leh
Muuqaal Jeermis, dillaac, biyo-celin, neefsashada, boodhka-dabeysha, khafiifka ah iyo guryaha la-dagaallanka
Codsi PANTEX coverall guud ahaan waxaa loogu talagalay inay shaqaalaha ka ilaaliso waxyaabaha halista ah. Waxaa loo istcimaalaa kahortaga xaalada qallalan ama dareeraha fudud ee buufiska oo kuxiran sunta iyo xaaladaha soo-gaadhista. Waxay ka hortegi kartaa bakteeriyada, fayraska, dareeraha sunta ah iyo dareeraha waxyeelada leh sida dhiigga bukaanka dareeraha, xabadka, kaadida iyo dareeraha kale, qalabkan ayaa ah mid u adkaysata daawada.
Xaddididda isticmaalka Qaabkan waxaa loogu talagalay in loogu isticmaalo deegaanno aad u xun sida ICU iyo Xaaladda Sterile.
Xidhmada 1pc / polybag, 30 pc / kartoon ama sidii aad ubaahantahay
Hore: Faa'iidada Go'aanka ah ee la tuuray
Gebi ahaan la tuuri karo
Badbaadinta Guud ahaan
Guud ahaan Ilaalinta